Maskaxdhiig/Stroke - slaganfall - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Uu laabo bogga bilaawga ee mawduuca
MaskaxdhiigStroke - slaganfall
Haddiii qofku maskaxdhiig uu helo, dhiigfuran maskaxda ah, micnaheedu waa in uu qofku helay xinjir dhiig ah oo xidid ku dhex istaagtay ama dhiigfuran maskaxda ku dhacday. Taasi waxay keeneysaa ogsijiin yari in ay maskaxda ku dhacdo oo ay dhaawacdo shaqooyinka oo laga hoggaamiyo dhinaca maskaxda ee xinjirta dhiigga ku istaagay ama dhinaca maskaxda ee dhiigfuranku ku dhacay. Maskaxdhiigu waa halis wuxuuna qofku u baahanyahay daryeel caafimaad si degdeg ah.
Dadka badan oo maskaxdhiig uu ku dhaco 65 sano bay ka weyn yihiin, laakiin dadka da’daas ka yar xitaa waa uu ku dhici karaa. Khatartu waa ay sii badaneysaa haddii uu qofku tu’saale ahaan sigaar cabo, dhiigkar qabo, dufanka dhiigga oo bato, sonkorow ama garaacidda wadnaha qabo.
Waa caadi in uu qofku dhib qabo maskaxdhiig keddib, laakiin dadku waa ay ku kala duwanyihiin arrintaa. Iyaga oo adeegsanayo daryeel caafimaad iyo buulayn bay dad badan ku fiicnaadaan ama waxay ku fiicnaadaan in ay helaan siyaabo kale ay wax ku suubiyaan.
Haddiii uu qofku ku dhaco maskaxdhiig waxaa caadi ah in uu qofku sidoo kale
kabaabyo ama qallal oo wajiga ku dhaca, gacmaha iyo lugaha, badanaa jirka haafkiis hadalku in uu ku adkaado qofka ama in uu ku adkaado fahmidda dadka kale aragga in uu ku xumaado hal il ama labada indhood socodka in uu ku adkaado qofka wareer aan la caddeyn karin, istaaga marka uu qofka dhibo ama dhinacdhinac marka uu qofku u dhacdhaco Sidoo kale qofku wuxuu hel karaa madax-xanuun si kedis ah ku imaada oo uusan qofku fahmi karin.
Inta uu qofku dhakhsida u helo daryeel caafimaad, ayay ku badanayaan fursadaha ay ifafaaluhu ku qarsoomaan ama uu qofku ku fiicnaado.
Haddii ay qofku ku istaagto xinjir dhiig ah badanaa qofka waxaa la siiyaa daawooyin ka hortaga in xinjiro kale oo dhiig ah ay aasaasmaan. Sidoo kale waxaa dhici karto in uu qofku u baahdo daawooyin furfuraya xinjirta dhiiga ah, laakiin taas waxay dhaceysoo keliya haddii uu qofku horay ka tago isbitaalka keddib marka ay ifafaaluhu bilawden keddib. Haddii qofka dhiigfur maskaxda ku dhacdo waxaa dhici karto in loo baahdo in lagu sameeyo qofkaas qalliin.
Sidoo kale waxaa loo baahnaan karaa daryeel kale, tusaale ahaan daawooyin yareeya kacsanaanta dhiigga.
Badanaa qofku isbitaalka buu jiftaa muddo si markaas loo daryeelo oo loo buulayo.
Goorma baa daryeel caafimaad la raadsanayaa?
Haddii uu qofku isku arko ama qof kale oo u dhaw ku arko ifafaale oo uu isleeyahay maskaxdhiig baa sabab u ah waa in isla markaas la wacaa 112.
Markasta waxaa la wici karaa talo bixinta daryeelka caafimaadka si talo bixin loo helo.
Miljonsatsning i norr på samers hälsa
Specialistvården Campus - en vinst för patienterna